Iza amin'ireo olon-dehibe na zanaka no handao ireo voankazo mamy mamy? Ny ronono dia tsy vitan'ny fikarakarana mareva-doko fotsiny, fa ny trano fitehirizana vitamina sy ny singa ilaina ihany koa. Mety ho sarotra ny mikarakara zaridaina eny an-jaridaina, kanefa raha manaraka ny fizotry ny fitsipika fototra ianao, dia afaka maniry vokatra tsara.
Karakarao ny menaka fihosotra
Ny fepetra manan-danja indrindra amin'ny fitomboana tsara dia ny fitotoana ara-potoana, ny tany mamy ary ny fiakarana ambony. Zavamaniry tena mahasosotra io, ka tsy azo atao ny manalefaka ny tany, indrindra amin'ny fahavaratra. Amin'ity tranga ity, ny fiakaran'ny rano dia hanana fiantraikany ratsy eo amin'ny toeran'ny kirihitra. Andeha hodinihintsika ny foto-pikarakarana fikarakarana voaloboka mena:
Ny famotehana ny tany dia tena zava-dehibe amin'ny fitomboana. Mandritra izany fotoana izany, ataovy araka izay azo atao, mba tsy handratra ny fototarazo. Ny halalin'ny famotsorana izay ilaina ao anatin'ny fefy iray metatra dia tsy tokony hihoatra ny 7 santimetatra. Mba hamerenana ny hafanana eny ambonin'ny tany amin'ny tany ela, dia tokony halefa amin'ny humus na ny tavy.
Mandritra ny fitomboan'ny fitomboan'ny taom-pambolena, ny fiakarana ambony sy ny fikarakarana tsara dia tsy maintsy atao. Tsara kokoa ny mampiasa ny diloilo nitroka amin'ny faran'ny fahavaratra, ary avy eo miditra amin'ny dite matevina.
Ny fikarakarana tsara ny fambolena dia manolo-kevitra ny fanesorana tsy misy hatak'andro ny fisifototra sy ny fako. Vetivety dia hesorinao daholo ny tsy ilana azy, ny tsy fahampian-tsakafo dia tsy hisy intsony. Izany dia ahafahanao mampitombo ny fifantohana ny sakafo ao anaty kirihitra sy ny jiro avo lenta izay hanome vokatra be dia be. Ao amin'ny kianja iray dia ampy ny manana laka 6.
Aorian'ny famokarana, manakaiky ny fanombohan'ny andro mangatsiaka, ny kirihitra dia vonona amin'ny ririnina. Mba hanaovana izany, dia tapaho ny ampahany manontolo amin'ny sisin-tany, manangona ny ravina ary ny volon'ondry lavalava. Avy eo dia mihodina ny elanelana amin'ny tany sy ny volombava manaraka.
Tokony hanomboka ny fingotra rehefa manomboka manomboka ny fotony ary manomboka ny lanezy voalohany. Mandra-pahatongan'izany fotoana izany, tsy misy tokony hatao, satria noho ny fanomezana sakafo mahavelona amin'ny tifitra, ny zavamaniry dia manangona ny hery ho amin'ny fitomboan'ny fitomboana amin'ny vanim-potoana manaraka.
Mavo mainty hoditra: fikarakarana
Ho an'ny fambolena azo antoka dia mifantina faritra maizim-borona. Tsy tokony hiparitaka amin'ny rivotra ny toerana, tsy mandefitra ny orinasa sy ny drafitra. Ny iray amin'ireo toetra mampiavaka ny karazam-bolo maro toy izany dia ny fanoherany ny aretina. Avoahy ny manodidina ny karazam-bary, voatabiha: izy ireo dia mety ho mpihazona verticilliform.
Raha ny fanangonam-drano, dia zava-dehibe tokoa izany mandritra ny vanim-potoana mamy. Raha tsy ampy ny hafanana, dia hiharatsy ny voankazo izany. Ankoatr'izany, ny tsy fahampian'ny fandroana dia mety hitarika ny fisehon'ny lolo marefo amin'ny fanoloana.
Mavo mavo: karakarao
Tahaka ny felam-bongo mainty sy mavo dia malemy kokoa noho ny havany mena. Ho an'ny ririnina, ireo mpamboly dia tsy mamatotra mafy ny kirihitra ao anaty lambondriaka ary mamela azy ireo amin'ny ririnina. Ireo hetsika ireo dia mendrika hatao alohan'ny hanombohan'ny hafanana, raha tsy ambany ny mari-pana amin'ny 6 ° C.
Rehefa nambolena tao anaty lavaka tsirairay ny fambolena iray eo ambony latabatra misy menaka be pitsiny. Mbola ao anatin'ny telo taona dia tsy afaka mamelona ilay orinasa mihitsy ianao. Zava-dehibe ny tsy mamela ny fanadiovana ny tany. Mihatra amin'ny lohataona maina koa izany. Eo ambanin'ny roatra tsirairay dia manondraka siny telo farafaharatsiny. Ny felam-boninkazo anana dia mitaky fitandremana amim-pitandremana, iray amin'ireo fepetra tena manan-danja indrindra amin'izany. Izany dia ahafahanao mitazona ny fahantrana any amin'ny faritra fotsy, manangom-bokatra avy amin'ny ranomandry.
Rasalama: fanodinana ary fikarakarana
Matetika dia manaparitaka kirihitra miaraka amin'ny fanampian'ny fiterahana. Ny fanangonam-bokatra dia tsy maintsy manana rafitra fakan-drivotra tsara sy mivoatra. Mba hambolena, dia handavaka lavenona be dia be mba hahafahan'ny fakan-tsolika maka malalaka. Ny plant dia tokony avy hatrany rehefa avy nihady, raha tsy izany dia ho maina fotsiny ireo fakom-bary sarobidy.
Ny fanangonam-bozaka dia vita ary ankehitriny dia mila fikarakarana tsara ianao. Aorian 'ny fitsangantsanganana dia aoka ho azo antoka ny hanangona ny tany ary handefa azy betsaka. Izany dia hanampy amin'ny fiarovana ny fifandraisana amin'ny fakan-kazo amin'ny tany ary manafoana ny fahabangana amin'ny tany.
Akrarium Garden - mahafinaritra!
Sakafo ho an'ny trano fambolena vita amin'ny polycarbonate - ny mari-pahaizana tsara indrindra
Shinoa Shinoa - mitombo avy amin'ny voa
Ciniya - fambolena sy fiahiana
Cinium - mitombo avy amin'ny voa, rehefa nambolena tamin'ny zana-ketsa, fitsipika manan-danja amin'ny fambolena
Room Cineraria - fitsipika fototra momba ny fikarakarana sy fitomboan'ny ao an-trano
Ahoana no hananana bonsai ao an-trano?
Ahoana no ahafahan'ny voanjo - ny fototry ny fikarakarana sy ny fambolena ny voanjo
Lamban-tsakafo - recipe
Ahoana ny fomba hitondrana bandy ho an'ny orgasme?
Famerenana ny parquet
Lidy telo ambony
Orinasa siramamy ao Morgan-Lewis
Fanatanjahantena ho an'ny "voay"
Ahoana no hikarakarana ny zaza vao teraka?
Akanjo trondro amin'ny tanana manokana
Atombohy amin'ny rantsantanana
Ireo mpikimpikan'ny vehivavy - kiraro eo amin'ny lampihazo
Bursitis amin'ny fiaraha-miasa amin'ny elatra - famantarana sy fitsaboana
Kraslava - toetoetran'ny mpizahatany
Inona no dikan'ny nofinofina alakamisy ka hatramin'ny zoma?
Fiatoana ho an'ny fandroana
Vinaingitra amin'ny ratra - fitsaboana amin'ny fitsaboana amin'ny vahoaka
Ny fofona amin'ny acetone avy amin'ny vava amin'ny olon-dehibe dia ny antony
Ny taolam-bolo amin'ny taolana - soritr'aretina